Mee Android Nougat melite na Huawei P9 Lite | Gam akporosis
ndabara | | Huawei, Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
Ugbu a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ gam akporo ndị ka nọ na Marshmallow dị elu karịa ihe emelitere ugbu a na ụdị ọhụrụ nke Android Nougat. Ya mere, taa m wetara gị nkuzi nkuzi ebe M ga-akụziri gị otu ị ga - esi wụnye mbipute n'efu wee pịazie gam akporo 7.0 melite na Huawei P9 Lite maka ọnụ ndị Europe L-31.
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enweta mmelite n'ọdịnihu na-enweghị ichere maka ụlọ ọrụ anyị iji hazie ngwanrọ ahụ wee malite mmelite ahụ ebe ọ bụ na ha na-ewekarị ogologo oge iji mezuo usoro a.
2 Budata femụwe European version (C432)
3 Rịọ gị Kpọghe koodu
4 Wụnye mgbake
6 Free femụwe nwụnye.
7 Mee mmelite site na ngwa HiCare
Usoro a gụnyere ihe egwu, mana Ọ bụrụ n ’ịgbaso usoro akọwapụtara, nsogbu ọ bụla agaghị eme.
Site na ịme usoro a, anyị agaghị efunahụ nkwa ahụ, mana a na-atụ aro ya ma ọ bụrụ na maka ebumnuche ọ bụla, ọnụ na-ewe iwe ma anyị ka nwere nkwa ugbu a, anyị ga-alaghachi na Android Marshmallow
Tupu ịgbaso nkuzi a, gbalịa ime nkwado ndabere ebe ọ bụ na usoro ndị a rụọ ụlọ nrụpụta ihe site na ihichapụ ihe niile anyị nwere n’ọgwụ anyị.
A na-atụ aro usoro a maka mmadụ niile nwetara ọnụ a site na ụlọ ọrụ ekwentị na-enweghị nkwa ma ọ bụ na-adịgide adịgide, ebe ọ bụ na eziokwu nke ichere ya iji melite gam akporo Nougat adịghị njọ. Ọ dabara mesie ya ike na nkuzi a bụ maka ebe ndị Europe (L-31). Agbanyeghị, enwere usoro ịmanye mmelite ahụ na ọdụ ndị Latin America.
Ọ bụrụ na ị bịarute ebe a, n'ezie, ị nwekwara mmasị na isiokwu ndị a metụtara Huawei P9, esi gbanye P9 lite na nyocha miri emi nke Huawei P9
Budata femụwe European version (C432)
N'okwu a, m hapụrụ gị njikọ nke kachasị kwụsie ike nke ụdị European n'efu C432B160 ebe ọ bụ na enwere ndị ọzọ nwere nsogbu na ọrụ google play ma ghara ikwe ka ahazie ekwentị ahụ n'ụzọ ziri ezi. Anyị ga-adọpụ ya ruo mgbe anyị ga-ahapụ faịlụ a na-akpọ Update.app. Ozugbo amịpụtara anyị, anyị mepụtara folda na kaadị SD nke a na-akpọ dload, n'ime nke a ka anyị detuo faịlụ anyị meghere.
Rịọ gị Kpọghe koodu
Dị ka m kọwara na mbụ na nkuzi ọzọ, anyị kwesịrị inwe OEM lokpọghe nhọrọ na USB debugging rụọ ọrụ. Iji rịọ koodu anyị, anyị ga-enweta ya Akwụkwọ Huawei ma jupụta ozi ha chọrọ.
Mgbe e mesịrị na esta ngwaọrụ anyị mepee bootloader iji wụnye mgbake kwekọrọ na mbipute nke gam akporo anyị nwere, na nke a Marshmallow. N'ime zip ahụ ahapụwo m gị ngwaọrụ mkpọchi, mgbake maka Marshmallow na faịlụ abụọ m ga-akọwa ihe ọ bụla bụ maka.
Anyị na-amalite ọnụ na ngwa ngwa ngwa ngwa, Mpịakọta- ma anyị jikọọ ọnụ anyị na pc.
Anyị na-adọghe folda m na-ahapụ n'ime zip ahụ na aha TWRP Marshmallow na anyị na-amalite faịlụ na-agwụ na ụsụ.
Mgbe ahụ, anyị pịa Tinye na mgbake ga-etinye onwe ya.
Anyị na-ahapụ ka ọnụahịa na-amalitekarị.
All European P9 Lite ọnụ na-abịa site na ndabara otu sim ma anyị nwere nhọrọ iji mee ka ọ sọrọ SIM. Ahapụrụ m faịlụ abụọ nwere aha OEMINFO mana ha abụghị otu, otu bụ maka Dual Sim na otu maka Single Sim. N'okwu a, anyị ga-eji OEMINFO ss, ebe ọ bụ otu o si na ndabara na njedebe anyị.
Anyị na-etinye faịlụ OEMINFO na SD
Anyị na-amalite na ọnọdụ mgbake ma anyị na-enye Wụnye
Anyị na-achọ faịlụ a na-akpọ OEMINFOC432SS na SD kaadị
Anyị na-agba ọkụ site na ịpịgharị mmanya iji gosi.
The sim oghere akwado a abụọ, kwuru software-nyeere ọrụ.
Ozugbo anyị kpaliri faịlụ ahụ, naanị ihe anyị ga-eme bụ laghachi na mgbake mmalite site na ịpị azụ na kama ịmalitegharị dị ka anyị ga-eme, anyị kpamkpam gbanyụọ ọnụ na Reboot> Nhọrọ ike.
Free femụwe nwụnye.
Iji wụnye ngwa ngwa C432B160 nke mbipute n'efu anyị ga-enwe faịlụ update.app nke anyị kwuru na mbido nkuzi a, na kaadi sd n'ime folda dload ahụ. Ọ bụrụ na anyị emeworị nzọụkwụ a, naanị ihe fọdụrụ ime bụ Nchikota bọtịnụ Mpịakọta +, Mpịakọta- na Ikeniile ozugbo itinye ọhụrụ femụwe.
Mee mmelite site na ngwa HiCare
Ugbu a ịmanye mmelite otú chọrọ nke Android Nougat niile anyị nwere ime bụ wụnye ngwa HiCare, nwere SIM n'ime ọnụ anyị, malite na Huawei ID ma hazie obodo anyị site na mgbe ahụ nweta nhọrọ ndị ọrụ mbụ nke OS melite na ọ ga-eziga C432B370 ma ọ bụ B371 na-akpaghị aka na mmelite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Mee Android 7.0 mmelite na Huawei P9 Lite
Ọ na-arụ ọrụ! ezigbo ederede ma kọwaa nke ọma !!
Ndewo, nke a na-arụ ọrụ maka P9 nkịtị na ekele?
Ọ bụghị nsụgharị ikpeazụ, Bluetooth anaghị arụ ọrụ, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Nwere ike inyere m aka, site n'inye ya iji weghachite ụlọ ọrụ mmepụta ihe mgbe nwụnye niile m hapụrụ enweghị keyboard na ọ naghị ekwe ka m gafere isi nke ịbanye akaụntụ google
Francisco, enwere ike ịmegharị njikọ ahụ? Egosiri na ada
Twitter megharia interface ya maka gam akporo, iOS na web